” JOOX 2020 Popular Song Award မှာချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့အတူ သီဆိုခဲ့တဲ့ အငွေ့အသက်များသီချင်းက (1) year ရေပန်းအစားဆုံးဆုရရှိခဲ့တဲ့ Ah Boy” – Cele Oscar
January 7, 2021 By L YC News
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် Ah Boy ကတော့ လက်ရှိ မှာ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ သမီး ၃ယောက် ကိုပိုင်ဆိုင်ထား သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇနီး ဖြစ် သူ မြတ်ရတနာကျော်ကလည်း ပထမဇနီး နဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက် အပေါ် အမေရင်း သဖွယ် ဂရုစိုက်မှုကြောင့် သူတို့မိသားစုလေးကတော့ အမြဲပျော်ရွှင်ကာ စိတ်ချမ်းသာ စရာကောင်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးမီက လည်း အဆိုတော်ချမ်းမြေ့မောင်ချို နဲ့ အတူ AhBoy ကတော့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ကို ဖန်တီးကာ ပရိသတ်တွေကိုချပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။Ah Boy နဲ့ မြတ်ရတနာကျော်ကတော့ အိမ်ထောင်သက် (၂) နှစ်ကျော် ရှိခဲ့ပေမယ့် အချစ်တွေ ကတော့ အခုချိန်ထိ လတ်ဆတ်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး နှစ်ယောက် အတူတူ ” Our Travel Diaries ” ဆိုတဲ့ Page လေး နဲ့ Vlog လေးတွေ ပြုလုပ် လျက် ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ မှာလည်း ”သီချင်းတွေ နဲ့ နှစ်တွေ အကြာကြီး ဝေးကွာခဲ့ပေမယ့် ပထမဆုံး ပြန်ဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အငွေ့အသက်များ သီချင်းလေးက ခုတော့ ကျွန်တော့်ဘဝအတွက် နောက်ထပ် မှတ်တိုင် တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ ရပါပြီ။ JOOX 2020 Popular Song Award မှာ ကျွန်တော် နဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို တို့ရဲ့သီချင်းလေး က ဆုရရှိသွားတဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာကျေနပ် ပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ ပထမဆုံးရဖူးတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကပေးတဲ့ ဂီတ နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဆုလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ခုလိုမျိုး ဆု ရရှိအောင် အပြိုင် vote ပေးခဲ့ကြတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ Fan တစ်ယောက်ချင်း ဆီတိုင်းရော၊ အထူးသဖြင့် မောင်ချို ရဲ့ Milestones များကို ကျေးဇူး အထူးအထူး တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီသီချင်းကို အကောင်းဆုံး ရေးသား ဖန်တီးပေးခဲ့ တဲ့ ကိုသားကြီး နှင့် Music Producer JCZ ကို လည်း ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် နောက်ထပ်သီချင်းတွေ ထပ်လုပ်ဖို့ ခွန်အားတွေ အများကြီးရသွားပါပြီ။ ကျွန်တော့် ပရိသတ်တွေ အတွက် ဒီထပ်ပိုကောင်း တဲ့ သီချင်းတွေနဲ့၂၀၂၁ မှာတင်ဆက် ပေးသွားနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါမယ်ဗျာ။ Love you all!!!”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့အတူ ၂၀၂၁ အစဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
Source: Kyaw Phyo Htun
ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော Ah Boy ကတော့ လကျရှိ မှာ ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ သမီး ၃ယောကျ ကိုပိုငျဆိုငျထား သူပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဇနီး ဖွဈ သူ မွတျရတနာကြျောကလညျး ပထမဇနီး နဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့ သမီးလေးနှဈယောကျ အပျေါ အမရေငျး သဖှယျ ဂရုစိုကျမှုကွောငျ့ သူတို့မိသားစုလေးကတော့ အမွဲပြျောရှငျကာ စိတျခမျြးသာ စရာကောငျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။မကွာသေးမီက လညျး အဆိုတျောခမျြးမွမေ့ောငျခြို နဲ့ အတူ AhBoy ကတော့ သီခငျြးလေးတဈပုဒျ ကို ဖနျတီးကာ ပရိသတျတှကေိုခပြွခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။Ah Boy နဲ့ မွတျရတနာကြျောကတော့ အိမျထောငျသကျ (၂) နှဈကြျော ရှိခဲ့ပမေယျ့ အခဈြတှေ ကတော့ အခုခြိနျထိ လတျဆတျနဆေဲ ဖွဈပွီး နှဈယောကျ အတူတူ ” Our Travel Diaries ” ဆိုတဲ့ Page လေး နဲ့ Vlog လေးတှေ ပွုလုပျ လကျြ ရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိ မှာလညျး ”သီခငျြးတှေ နဲ့ နှဈတှေ အကွာကွီး ဝေးကှာခဲ့ပမေယျ့ ပထမဆုံး ပွနျဆိုဖွဈခဲ့တဲ့ အငှအေ့သကျမြား သီခငျြးလေးက ခုတော့ ကြှနျတေျာ့ဘဝအတှကျ နောကျထပျ မှတျတိုငျ တဈခုဖွဈခဲ့ ရပါပွီ။ JOOX 2020 Popular Song Award မှာ ကြှနျတျော နဲ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြို တို့ရဲ့သီခငျြးလေး က ဆုရရှိသှားတဲ့အတှကျ အတိုငျးမသိ ဝမျးသာကနြေပျ ပီတိ ဖွဈရပါတယျခငျဗြာ။ကြှနျတျောဘဝရဲ့ ပထမဆုံးရဖူးတဲ့ ပရိသတျတှေ ကပေးတဲ့ ဂီတ နဲ့ ပကျသကျတဲ့ ဆုလေးဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ခုလိုမြိုး ဆု ရရှိအောငျ အပွိုငျ vote ပေးခဲ့ကွတဲ့ ကနြေျာ့ရဲ့ Fan တဈယောကျခငျြး ဆီတိုငျးရော၊ အထူးသဖွငျ့ မောငျခြို ရဲ့ Milestones မြားကို ကြေးဇူး အထူးအထူး တငျပါတယျခငျဗြာ။ ဒီသီခငျြးကို အကောငျးဆုံး ရေးသား ဖနျတီးပေးခဲ့ တဲ့ ကိုသားကွီး နှငျ့ Music Producer JCZ ကို လညျး ကြေးဇူးအထူး တငျပါတယျ။
ကြှနျတျော နောကျထပျသီခငျြးတှေ ထပျလုပျဖို့ ခှနျအားတှေ အမြားကွီးရသှားပါပွီ။ ကြှနျတေျာ့ ပရိသတျတှေ အတှကျ ဒီထပျပိုကောငျး တဲ့ သီခငျြးတှနေဲ့၂၀၂၁ မှာတငျဆကျ ပေးသှားနိုငျအောငျ ကွိုးစားသှားပါမယျဗြာ။ Love you all!!!”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့အတူ ၂၀၂၁ အစဟာ အဓိပ်ပါယျရှိသှားပွီဖွဈကွောငျး ပွောပွခဲ့တာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာ ပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျ ကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။
University of California က သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ် (၃) ခုကိုတစ်လအတွင်းမှာတင် အမှတ်အများကြီး နဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေ